Counterclaim isemthethweni inkcazelo counterclaim - Abaqondisi-mthetho ka-Norway! Isithai abaqondisi-mthetho, a isemthethweni portal.
Counterclaim isemthethweni inkcazelo counterclaim
Ibango nge defendant opposing ibango le-plaintiff kwaye ezama abanye uncedo ukususela plaintiff kuba defendantA counterclaim iqulathe assertions ukuba defendant ayikwazi kufumana eyenziwe nokuqala lawsuit ukuba plaintiff engafikanga sele iqalile intshukumo. Oko ilawulwa ngumthetho abaninzi efanayo imigaqo ukuba ukulawula i-amabango eyenziwe a plaintiff ngaphandle kokuba ukuba inxalenye impendulo ukuba defendant ibangela in impendulo kwi-plaintiff ke isikhalazo. Jikelele a counterclaim kufuneka ziqulathe iinyaniso ukutya ukuxhasa ngokumnika ka-uncedo defendant ukuba iinyaniso ingaba kwacacisa ukuba abe yinyaniso. Ezi nyaniso babe jonga enye msitho ukuba wanika ukunyuka ukuya plaintiff ke, Injongo Isenzo okanye babe jonga i-ngokupheleleyo ezahlukeneyo ibango ukuba defendant sele ngokuchasene plaintiff. Apho kukho ngaphezu omnye umntu kwi icala, counterclaim zinokwenziwa nanguye nawuphi na defendant ngokuchasene naziphi na plaintiff okanye plaintiffs. Ngokunxulumene imithetho elawula federal Zasekuhlaleni umgaqo-Nkqubo, defendant idla ezifunekayo ukuze wenze counterclaim kwi-impendulo ukuba counterclaim livela efanayo okanye intengiselwano radio ngomhla apho plaintiff ngu suing. Oku kubizwa ngokuba a compulsory counterclaim ngenxa yokuba ibango kufuneka senziwe kwimpendulo plaintiff ke isikhalazo kwaye ayikwazi kwenziwa emva kwexesha okanye ngendlela eyahlukileyo lawsuit. Ibango ngokuchasene i-plaintiff ukuba lusekelwe i ngokupheleleyo ezahlukeneyo isiganeko esinye uhlobo Permissive Counterclaim.
Umzekelo, umntu unakho sue umfazi kuba imali umonakalo othe ngenxa encinci injury kwaye abanye ipropati umonakalo emva zabo iimoto collided.
Phantsi imithetho elawula Pleading ezininzi iinkundla, umfazi ingaba kufuneka banga ubunyani a imfuneko imali umonakalo othe kuba efanayo kunokwenzeka ingozi yayo impendulo umntu ke isikhalazo okanye yena ingaba alahlekelwe ilungelo sue kwi ukuba ibango. Ukuba umntu kanjalo, kwenzeka ntoni ukuba ibe ngubani ummelwane borrowed umfazi ke lesixokelelwane wabona kwaye zange wabuyela kuyo, umfazi ayikwazi imfuneko kubuyela le wabona njengokuba counterclaim okanye yena ayikwazi linda kwaye sue umntu kuba ukuba ngexesha ezinye ixesha. Yena abe wenze isigqibo linda ukuze sue ngendlela eyahlukileyo inkundla okanye ngenxa yokuba yena akakwazi ufuna argue ezahlukeneyo iimeko kunye amabango phambi efanayo jury. A defendant idla ayikwazi ukwenza isibali-ibango ukuba akunakwenzeka ukuba enze enye ibango yi-nokuqala lawsuit. Umzekelo, lawsuit ukuya kuqokelela kwi ibango ayikwazi ukuqalwa emva kwexesha ixesha kuvunyelwe ngumthetho a Statute ka-kwezixhobo zokusebenza iphelelwe. Ngendlela ethile kwiimeko, nangona kunjalo, defendant babe banga ubunyani i-lixesha injongo intshukumo njengokuba counterclaim. Le nkqubo, kuvunyelwe ngezizathu ka-isidima kwaye ubulungisa, ngokuba kwebhodi recoupment Inkundla ingayalela ukucutha plaintiff ke imali umonakalo othe phezulu ukuba isixa-mali defendant ke counterclaim, kodwa defendant akayi kuvunyelwa i-affirmative imali imali ngaphezu isixa-mali apho plaintiff ube unelungelo lokuba. a retaliatory ibango nge defendant ngokuchasene plaintiff kwi lawsuit ibandakanywe defendant ke impendulo kwaye ethanda ukuba ngaphandle-cwangcisa uze - okanye ukucutha isixa-mali plaintiff ke yoqobo ibango ngokuchasene defendant. Umzekelo, Hotdog Iimveliso sues Barbecue Oyilwayo ke Eatery kuba dolla, kuba inyama wazisa ukuba Ibhili ke kodwa hayi imali kuba, Ibhili counterclaims ukuba Hotdog owes kuye dollazi, ukwenzela ukufaka ka-engalunganga chicken livers, ngoko ke Hotdog kuphela anelungelo lokuba dollazi. Kwiindawo ezininzi states i-counterclaim ngu-hayi ixesha elide kuvunyelwe, apho kumzekelo i emnqamlezweni-isikhalazo, nto leyo eyahlukileyo isikhalazo, kufuneka ezenziwe sesi sibini yi-defendant, kodwa njengenxalenye efanayo lawsuit. Kwesinye isandla, federal amatyala, ukuba defendant ikholelwa ukuba yena - yena - sele a legitimate counterclaim ukunciphisa umonakalo othe kumele alleged (kuchazwe) kwi-impendulo okanye kungenxa barred ukusuka ekubeni mbasa. (Bona: impendulo, umnqamlezo-isikhalazo) Zonke iziqulatho kule website, kuquka-magama, isichazi magama, uluncwadi, ucingo, kwaye enye imbekiselo data ngu kuba ezinolwazi ngeenjongo kuphela.
Olu lwazi akufunekanga uqwalaselwe uzalise, phezulu ukuya umhla, kwaye asiyiyo intended ukuba abe nenxaxheba indawo utyelelo, luhlomle kuwo, okanye ingcebiso a esemthethweni, ukhathalelo, okanye naliphi na elinolwazi.
Isithai Elitshutshisayo Norway Abaqondisi-Mthetho
Норвегия - Шаерысьтымы